Theresa May oo hakisay ololihii doorashada kaddib weerarkii Manchester - BBC News Somali
Theresa May oo hakisay ololihii doorashada kaddib weerarkii Manchester
Image caption Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa hakisay ololaheedi doorashada guud ee dalka Britain muddo labo isbuuc ah kaddib weerarkii xalay lagu qaaday xaflad bandhig faneed oo lagu qabanayay magaalada Manchester ee dalka Britain.
Weerarakani ayaa waxaa sidookale ka hadlay axsaabta mucaaradka ee dalkaasi Britain.
Xisbiga Scottish National Party ayaa isaguna baajiyay daahfurka qorshihiisa siyaasadeed ee doorashada oo lagu waday in uu qabsoomo saacadaha soo socda.
Image caption Theresa May
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee ugu weyn Britain, Jeremy Corbyn ayaa weerarkani ku tilmaamay dhacdo aad u xun , waxaana sidookale ololihiisa doorashe baajiyay hogaamiyaha xisbiga Liberal-ka Tim Farron.
Jawiga marka uu qaraxu dhacay
Weerarakani ka dhacy magaalada Manchester ee dalka Ingiriska ayaa waxaa ku dhintay Sagaal iyo toban qof, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen, waxaana la rumeysanyahay inuu ahaa fal aragagixisanimo.
Dad goob joogayaal ah ayaa BBC-da u sheegay inay maqleen dhawaq xooggan markii ay dhamaadeen heeso ay goobtaasi si toos ah uga qaadeysay Ariana Grande, oo ah fanaanad caan ah oo u dhalatay Mareykanka.